(၁) တခုအမှား၊ ပြုမိငြားလျက်၊
(၂) တပါးသူကို၊ ပြုရန်ဆိုကာ၊
(၃) ထိုအမှားအား၊ တန်ဘိုးထား၍၊
(၄) မှားပြီဆိုလျှင်၊ ရန်ရှာချင်သေး၊
သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားတော်မူသော လူမိုက် လက္ခဏာ လေးပါးကို ကဗျာအဖြစ် ရေးဖွဲ့ ပူဇော်ပါသည်။
Sum My Post
Posted by Harry at 19:360comments
သိပ်ပါလော့ ... အို, မရဏ
သင်္ခါရတရား တနည်းအားဖြင့် သေခြင်းတရားနဲ့ ပတ်သက်လာရင် မြန်မာကဗျာတွေထဲမှာ “သူတည်းတယောက်၊ ကောင်းဖို့ရောက်မူ …” အစချီထားတဲ့ အနန္တသူရိယအမတ်ကြီး ကွပ်မျက်ခံရကာနီး ရေးစပ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုကြတဲ့ သံဝေဂလင်္ကာလေးကို တခြား ဘယ်ကဗျာမှ မီမယ် မထင်ပါဘူး … ဒီလိုပဲ “သူတည်းတယောက်” ကို မမီစေကာမူ ဖြစ်ရပ်ခြင်းခပ်ဆင်ဆင်နဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းတဲ့ အင်္ဂလိပ် ကဗျာလေးတပုဒ် တွေ့တာနဲ့ ဘာသာပြန်ကြည့်မိပါတယ် …
ဒီကဗျာလေးက ပန်းမ်ဘရွတ်ခ်မြို့စား နဲ့ အင်္ဂလန်မိဘုရားကြီး ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အန်း(န်)ဘိုလင်း ကွပ်မျက်မခံရမီ နာမည်ကျော် လန်ဒန်မျှော်စင် အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ အကျဉ်းချခံနေရတုန်း ရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့ ကဗျာလို့ ဆိုပါတယ်။ တချို့ကတော့လည်း သူ့ရဲ့ မောင်လေး ရော့ခ်ဖို့ဒ်မြို့စား ဂျော့ခ်ျဘိုလင်း (George Boleyn, Viscount Rockford) ရေးခဲ့တာလို့ ပြောကြပါတယ် … ဒါပေမဲ့ အန်း(န်)ဘိုလင်း ရေးခဲ့တယ်လို့ အများက ပိုပြီးလက်ခံထားကြပါတယ်။
အန်း(န်)ဘိုလင်းဟာ တကယ်တော့ ပေါ့သေးသေးမဟုတ်ဘူးလို့ပဲ ပြောရမှာပါ။ သူကိုယ်တိုင် အင်္ဂလန် မိဘုရားကြီး ဖြစ်ခဲ့သလို သူ့သမီးတော်လေးဟာ သူကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်း “အပျိုစင်ဘုရင်မ” လို့ လူသိများတဲ့ အင်္ဂလန်ပြည့်ရှင် ပထမ အယ်လီဇဘက် ဘုရင်မကြီး ဖြစ်လာခဲ့တာကြောင့်ပါပဲ။ ဒီ့ထက်ပိုအရေးကြီးတဲ့ အကြောင်းတခုကတော့ ခရစ်ယာန်သာသနာ သမိုင်းမှာ အလွန်အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍတခုမှာ ပါခဲ့သူမို့ပါ။ သူ့ကို အကြောင်းပြုပြီး The English Reformation လို့ ခေါ်တဲ့ အထင်ကရ ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းခွဲကြီး တခုဖြစ်တဲ့ အင်္ဂလိကန်ဂိုဏ်းခွဲကြီးဟာ ပင်မ ရိုမန်ကက်သလစ်ဂိုဏ်းတော်ကြီးကနေ ခွဲထွက်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရတဲ့အထိတောင် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲ ဆိုရင်တော့ သူ့ကို တရားဝင်လက်ထပ်ပြီး မိဘုရားအရာ မြှောက်ချင်တဲ့ အတွက် အင်္ဂလန်ပြည့်ရှင် အဋ္ဌမမြောက် ဟင်နရီ ဘုရင်မင်းမြတ်ဟာ လက်ရှိမိဘုရား ကက်သရင်းကို ကွာရှင်းဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီခေတ်ကာလ က ခရစ်ယာန် သာသနာပိုင် ဖြစ်တဲ့ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး သတ္တမမြောက် ကလီမင့်က ဒါကို လက်မခံပါဘူး။ ဒါဟာ ရိုမန် ကက်သလစ် ကျောင်းတော်ရဲ့ အာဏာ အင်္ဂလန်မှာ ပြိုကွဲပျက်စီးခြင်းရဲ့ အစပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဟင်နရီ (၈) က အကြောင်းရှာတာလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ငါ ရှင်ဘုရင် ဘယ်နှစ်ပတ် ပတ်ပတ် ဆိုသလိုပေါ့ … သက်ဦးဆံပိုင် ဘုရင်ပဲဟာ … သူလိုချင်တဲ့ မိန်းမ သူယူတာ ဘယ်သူက ဘာပြောရဲမှာလဲလေ … တရားဝင် ယူလို့ မရလည်း တရားမဝင် ယူထားတဲ့ မောင်းမမိဿံတွေ အများကြီး ရှိနေတာပါပဲ … အန်း(န်)ရဲ့ ညီမ မေရီ ကိုယ်တိုင်ကကို ဟင်နရီဘုရင်ရဲ့ မောင်းမမိဿံပေပဲဟာ။ အဲဒီခေတ်က ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးတွေ ဟာ သက်ဦးဆံပိုင် ဘုရင်တွေထက်တောင် ပိုပြီး တန်ခိုးအာဏာ ကြီးမားပြင်းထန်လို့ နိုင်ငံတွေက နှစ်စဉ် အခွန်ဘဏ္ဍာတော်တွေ ဆက်သနေရတာကို ရပ်ပစ်ချင်လို့ အကြောင်းရှာပြီး ဟင်နရီ ရွှေ့လိုက်တဲ့ အကွက်လည်း ဖြစ်ကောင်းပါရဲ့။
ဒါနဲ့ပဲ ၁၅၃၃-ခုနှစ်၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၅-ရက်နေ့မှာ အန်း(န်)နဲ့ ဟင်နရီ လက်ထပ်ပြီး ဟင်နရီနဲ့ မိဘုရားဟောင်း ကက်သရင်း တို့ရဲ့ လက်ထပ်မှုကို ၁၅၃၃-ခုနှစ်၊ မေလ ၂၃-ရက်နေ့မှာ တရားမဝင်ကြောင်း ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ နောက် ငါးရက် အကြာမှာတော့ အန်း(န်) နဲ့ ဟင်နရီတို့ရဲ့ ထိမ်းမြားမင်္ဂလာကို တရားဝင်ကြောင်း ကြေညာလိုက်ပြီးတဲ့နောက် မကြာခင်မှာ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးက အင်္ဂလန်ကျောင်းတော်ကို ရိုမန်ကက်သလစ်ကျောင်းတော်ကနေ ထုတ်ပယ်ပစ်လိုက်တဲ့ အတွက် အင်္ဂလန်ကျောင်းတော်ကို ဘုရင်က သူ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကို ပို့ပြီး အင်္ဂလိကန် အသင်းတော်ရဲ့ အကြီးအမှူးအဖြစ် သူ့ကိုယ်သူ ခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်။ ကွာရှင်းခြင်း၊ ထိမ်းမြားခြင်းများဟာ ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးဓလေ့ထုံးတမ်းအရ ဘာသာရေးအကြီးအကဲရဲ့ သဘောတူခွင့်ပြုမှုရရှိမှ တရားဝင်တာကြောင့် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး သဘောမတူတဲ့အတွက် ဘုရင်က သူ့ကိုယ်သူ ဘာသာရေးအကြီးအကဲ ခန့်ပြီး သူ့ထိမ်းမြားခြင်းကို တရားဝင်တယ်လို့ သူ့ဟာသူ ဆုံးဖြတ်ပေး လိုက်တာပါပဲ။ ပိုင်တယ်နော် ...
ဒါပေမဲ့ မကြာခင်မှာပဲ အန်း(န်)ရဲ့ ဇာတာညှိုးမှိန်ပြီး ဟင်နရီက အပြစ်ရှာပါတော့တယ်။ အဓိက အချက်ကတော့ ထီးညွှန့်နန်းလျာအဖြစ် သားတော်လေး မမွေးဖွားပေးနိုင်ဘဲ သမီးတော်သာ မွေးဖွားပေးနိုင်တာရယ်၊ သားတော်လေးကို ဆောင်ထားတဲ့ ကိုယ်ဝန်က ကံအကြောင်းမလှဘဲ ပျက်ကျသွားရရှာတာရယ်က အန်း(န်)ကို အရာက ကျစေခဲ့တယ် လို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပေမဲ့ ဟင်နရီက နောက်ထပ် အချစ်သစ်တွေ့နေတဲ့အချက်ကလည်း အတော်လေး အရေးပါမယ့် အချက် ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။ ၁၅၃၆-ခု၊ မေလ ၂-ရက်နေ့မှာ အန်း(န်)ကို နိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်ဖျက်မှုနဲ့ အရာချဖမ်းဆီးပြီး လန်ဒန်မျှော်စင်မှာ အကျဉ်းချထားလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ အန်း(န်)ဟာ နိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်ဖျက်မှု၊ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှု၊ သွေးရင်းလိင်ဆက်ဆံမှု စတဲ့ စွဲချက်တွေနဲ့ အပြစ်ရှိတယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး သေဒဏ်စီရင်ခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။ သူ့ကို စစ်ဆေးတရားစီရင်တဲ့ဂျူရီအဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာ သူ့ဦးရီးတော်အရင်းဖြစ်သူ သောမတ်စ် ဟိုးဝဒ်နဲ့ သူ့ချစ်သူဟောင်း ဟင်နရီပါစီ တို့ပါ ပါဝင်နေတာကတော့ ကံကြမ္မာရဲ့ လှောင်ပြောင်မှုလေလားလို့ ထင်စရာပါပဲ။
ဒါပေမဲ့ ဟင်နရီဟာ အန်း(န်)အပေါ်မှာ နောက်ဆုံးကရုဏာကို ပြခဲ့လေသလား၊ အပြစ်မဲ့သူကို အကြောင်းရှာပြီး ရက်ရက်စက်စက် သုတ်သင်ပစ်ရတာကိုပဲ လိပ်ပြာမသန့်ဖြစ်လေရော့သလားတော့ မဆိုနိုင်ပါဘူး … သေဒဏ်ကို မီးရှို့သတ်မဲ့အစား ခေါင်းဖြတ်သတ်စေလို့ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါပဲ။ သေရတာခြင်းအတူတူပေမဲ့ မီးရှို့အသတ် ခံရသလိုတော့ မချိမဆန့် မခံစားရဘဲ အလွယ်တကူ အသက်ထွက်သွားစေအောင်တော့ လုပ်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့လေ။
မေလ ၁၉-ရက်၊ သောကြာနေ့ဟာ အန်း(န်)ရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ကို ပုံမှန် လူသတ်စင်ပေါ်မှာ မသတ်ဘဲ လန်ဒန်တာဝါ အကျဉ်းထောင်ကြီးရဲ့ ဝင်းထဲက ခုလက်ရှိ ဝါတာလူးစစ်တန်းလျားရဲ့ ရှေ့မှာ ရှိနေတဲ့ မျှော်စင်ဖြူရဲ့ မြောက်ဖက်မှာ ငြမ်းဆင်ထားတဲ့ လူသတ်စင်ပေါ်မှာ အန်း(န်)ရဲ့ ဘဝဟာ နိဂုံးကမ္ပတ် အဆုံးသတ် သွားခဲ့ရပါတယ်။ သူ ကွပ်မျက်ခံရတဲ့အချိန်မှာ အသက် သုံးဆယ်ဝန်းကျင်သာ ရှိပါသေးတယ်။
နန်းကျအိမ်နိမ့်စံ အန်း(န်) မိဘုရားကြီးဟာ အတွင်းခံကိုယ်ကျပ်အနီရောင်ပေါ်မှာ အကွက်ဖော်ပန်းထိုးထားတဲ့ မီးခိုးရင့်ရင့်ဝတ်ရုံဂါဝန်ရှည်ပွပွကြီးကို ဆင်မြန်းပြီး အဲမင်းန် သားမွေးခြုံထည်လေးကို လွှမ်းခြုံရင်း အပျိုတော်နှစ်ယောက် ခြံရံပြီး မိဘုရားနန်းဆောင်ကနေ လူသတ်ငြမ်းစင် ကို နောက်ဆုံးခြေလှမ်းများနဲ့ လျှောက်လှမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။ ရဲရင့်တည်ကြည်စွာနဲ့ မကြာခင်မှာ သေရတော့မယ့်သူ မဟုတ်သလိုဘဲ ငြမ်းစင်ပေါ်ကို တက်လှမ်းသွားပြီး လူတွေကို မိန့်ခွန်းတိုလေး ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။
“ခရစ်ယာန်သူတော်ကောင်းတို့ … ဒီနေရာကို တရားဥပဒေအရ သေခြင်းနဲ့ ရင်ဆိုင်ဖို့ လာခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မကို သေဒဏ် စီရင်ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ ဥပဒေအရ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်မအနေနဲ့ ဘာမှ ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်မနေတော့ပါဘူး။ ဒီကို ကျွန်မလာတာ ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း ပြစ်တင် စွပ်စွဲဖို့မဟုတ်သလို ဒါမျိုးတွေ ပြောဖို့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မကို စွပ်စွဲ ရှုံ့ချပြီး သေဒဏ်စီရင်ခဲ့ပေမဲ့ ဘုရင်မင်းမြတ်ကို ဘုရားသခင်စောင့်ရှောက်ကယ်မစေဖို့နဲ့ သင်တို့အပေါ် ပိုမိုသိမ်မွေ့ပြီး ပိုမိုကရုဏာတော်ထားတတ်တဲ့ ဘယ်တုန်းကမှ မရှိခဲ့ဖူးတဲ့ မင်းသားတပါးအဖြစ် သင်တို့ကို ပိုမို ရှည်ကြာစွာ အုပ်စိုးနိုင်ပါစေ လို့ ကျွန်မ ဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မအတွက်တော့ သူဟာ ထာဝရကောင်းမွန်သိမ်မွေ့ပိုင်စိုးနေတဲ့ အရှင်သခင်ပါပဲ။ ကျွန်မအမှုထဲမှာ မဆီမဆိုင် စွပ်စွဲခံရပြီး ပါဝင်ခဲ့ရသူ တစုံတယောက်များရှိခဲ့မယ် ဆိုရင် သူတို့ကို အကောင်းမွန်အမျှတဆုံး တရားစီရင်ပေးဖို့ တောင်းဆိုလိုပါတယ်။ ဒီလောကကြီးနဲ့ သင်တို့အားလုံးကို ကျွန်မ ခွဲခွာ သွားတော့မှာမို့ သင်တို့အားလုံး ကျွန်မအတွက် ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးကြဖို့ ရင်ထဲ အသည်းထဲက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ တောင်းဆိုပါရစေ … အို … အရှင် တပည့်တော်မအပေါ် ကရုဏာထားတော်မူပါလော့ … အို ဘုရားသခင် တပည့်တော်မ၏ ဝိညာဉ်အား အပ်နှင်းပါ၏ …”
အန်း(န်) မိဘုရားကြီးဟာ အဲမင်းန် သားမွေးခြုံထည်လေးကို ဖယ်ရှားပြီး ခေါင်းစွပ်ကို မ,လို့ ဆံပင်ကို စည်းနှောင်ထား လိုက်ပါတယ်။ ငိုကြွေးနေကြတဲ့ အပျိုတော်၊ ရံရွေတော်တွေကို နှုတ်ဆက်ပြီး ဆုတောင်းပတ္တနာပြုပေးဖို့ ပြောကြားရင်း ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ပါတယ်။ ရံရွေတော်တယောက်က သူ့မျက်လုံးတွေကို အဝတ်စည်းပြီး ပိတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အန်း(န်)ဟာ ဒူးထောက်တဲ့နေရာမှာ ပြင်သစ်ပုံစံနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို တဖြောင့်တည်း မတ်ထားပြီး ဒူးထောက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ “ယေရှုသခင် … တပည့်တော်မ၏ ဝိညာဉ်အား လက်ခံတော်မူပါ … အို အရှင် ဘုရားသခင် တပည့်တော်မ၏ ဝိညာဉ် အပေါ် ကရုဏာထားတော်မူပါလော့ …” လို့ နောက်ဆုံး ဆုတောင်းစကားကို ထပ်ခါတလဲလဲ ရေရွတ်နေရင်းနဲ့ပဲ ဓားရောင် တချက် ဝင်းကနဲအလက်မှာ အန်း(န်)ရဲ့ ဘဝလည်း အဆုံးသတ်သွားရပါတော့တယ်။
အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ ခေါင်းပြတ်ကြီးကို ကိုင်ပြီး လျှောက်သွားနေတဲ့ အန်း(န်)ကို တွေ့လိုက်ရတဲ့ အစောင့်တွေလည်း မနည်းဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လင်းအားကြီးအချိန်တွေမှာပါတဲ့။ အန်း(န်)တစ္ဆေဟာ လန်ဒန်မျှော်စင် အကျဉ်းထောင်ကြီးရဲ့ နာမည်ကျော် တစ္ဆေဒဏ္ဍာရီတွေထဲမှာ ထင်ရှားတဲ့ ဇာတ်ကောင်တကောင်ပါပဲ။
သမီးတော်လေး အဲလစ်ဇဘက် ဘုရင်မကြီးအဖြစ် နန်းတက်လာပြီးချိန်မှာတော့ အင်္ဂလိပ်သမိုင်းပညာရှင် ဂျွန်ဖော့က်စ် ကနေတဆင့် မယ်တော်ကို English Reformation ရဲ့ အာဇာနည် သူရဲကောင်းမယ်အဖြစ် ချီးမြှင့်မြှောက်စား ရေးသားစေခဲ့ပါတယ်။
ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်မှုတွေကနေရရှိတဲ့ နာကျင်မှု ဝေဒနာတွေကို ခံစားရင်း သေခြင်းတရားကို စောင့်မျှော်နေရချိန်မှာ ရေးသားခဲ့တဲ့ အန်း(န်)ရဲ့ ကဗျာလေးကို ခံစားကြည့်ကြပါဦး … မူရင်းကိုပါ ခံစားနိုင်အောင် ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အို မရဏ၊ ငါ့အားလှုပ်ယမ်း
သက်ဆိုးရှည်ရန်၊ မဖန်တီးပါ။ ။
ထိုက်တန်သလော၊ တွေးတောဖွေရှာ။ ။
ရေပွက်ပမာ၊ တသက်လျာထင့်။ ။
အန်း(န်)ဘိုလင်း (Anne Boleyn – Marquess of Pembroke)
ပန်းမ်ဘရွတ်ခ် မြို့စား နှင့်အင်္ဂလန်မိဘုရားကြီး (၁၅၃၃-၁၅၃၆)
O Death! rocke me asleep
O Death! rocke me asleep;
Bringe me to quiet reste;
let pass my weary, guiltles ghost
ring out my dolefull knell;
let thy sounde my death tell.
My paynes, who can expres?
Alas! they are so stronge
my lyfe for to prolonge.
for I must dye;
Alone, in prison stronge,
I wayte my destenye.
Wo worth this cruel hap, that I
should taste this miserie!
Anne Boleyn – Marquess of Pembroke and Queen Consort of England (1533-1536)
Photo credit: http://speedy.theanneboleynfiles.com/wp-content/uploads/2009/05/anneboleyninthetower2-278x300.jpg
Posted by Harry at 01:330comments
Labels: ဘာသာပြန်ကြည့်မိသည့် ကဗျာများ
ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်နံရံမှ ဆောင်ပုဒ်များ ... ဟုပြောကြသည့်စာများကို သံပေါက်အသွင်ဖြင့် ဘာသာပြန်ထားပါသည် ...
၁) ယခုအိပ်ပါ၊ အိပ်မက်သာ၊ ပေါ်လာပေလိမ့်မည်။
ယခုလေ့ကျက်၊ အားအင်ဆက်၊ အိပ်မက်ကောင်ထည်ပေါ်လိမ့်မည်။
၂) ကျွန်ုပ်ကုန်လာ၊ ယနေ့တာ၊ ဘယ်ရာဖြစ်သနည်း။
ရှုံးသူမနော၊ တောင်းခံသော၊ မျှော်မောနက်ဖြန်ဖြစ်လေ၏။
၃) နှောင်းလေပြီသာ၊ သင်ထင်ရာ၊ ချိန်ခါစောဆုံးဖြစ်သတည်း။
၄) ခုထ,လုပ်ပါ၊ နက်ဖြန်ခါ၊ ဆိုကာအချိန်မဆွဲနှင့်။
၅) သင်အံစေ့ငု၊ ပင်ပန်းမှု၊ ယခုခဏတာလျှင်တည်း။
သင်အံမပြု၊ ပင်ပန်းမှု၊ လူ့တဘဝစာလျှင်တည်း။
၆) လေ့လာဖို့မြဲ၊ ချိန်မနည်း၊ ဇွဲနှင့်လုံ့လနည်းခြင်းသာ။
၇) ချမ်းမြေ့ပျော်လတ်၊ ဆင့်သတ်မှတ်၊ ရတတ်လျှင်လည်း ရကောင်းမည်။
သို့စေတမင်း၊ အောင်မြင်ခြင်း၊ အလျဉ်းအဆင့်ရှိလေသည်။
၈) သင်အံလေ့လာ၊ ဘဝမှာ၊ ဤဟာတခုတည်းမဟုတ်။
သို့ပင်ဖြစ်ငြား၊ မကျော်လွှား၊ ဘာများသင်ကျော်နိုင်မည်နည်း။
၉) ပင်ပန်းရှောင်ကျဉ်၊ မရလျှင်၊ ပျော်ရွှင်ရင်ဆိုင်ခံစားပါ။
၁၀) ခပ်စောစောထ၊ ကြံ့ခံပြ၊ သင်ရယူလော့ အောင်မြင်မှု။
၁၁) ပြင်းပြမာန်ဟုန်၊ လုံ့လဂုဏ်၊ ပြည့်စုံထိန်းချုပ် စိတ်နှင့်ရုပ်။
ဤဂုဏ်ကင်းမူ၊ အောင်ပန်းချူ၊ လွယ်ကူမရ မည်သူမျှ။
၁၂) ကာလရထား၊ အချိန်များ၊ ဖြတ်သွားကုန်ဆုံးလွယ်လွန်းသည်။
၁၃) ယနေ့ယိုကျ၊ သွားရည်စ၊ စီးကျသွားမည် ဘယ်ဝယ်ဆီ၊
စီးလိမ့်အမှန်၊ မနက်ဖြန်၊ တဖန်မျက်ရည်စများဆီ။
၁၄) ပြင်းထန်ပင်ပန်း၊ သင်ယူလှမ်း၊ စည်းကမ်းလိုက်နာ ကစားပါ။
၁၅) ယနေ့လှမ်းခြေ၊ ရပ်လိုက်လေ၊ ပြေးပေဦးတော့ နက်ဖြန်တွင်။
၁၆) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ၊ နောင်ခါယံ၊ အမှန်မြင်သူစင်စစ်တည်း။
၁၇) ပညာဂုဏ်အင်၊ ဝင်ငွေပင်၊ အသွင်တူညီ၏။
၁၈) ယနေ့ဆိုတာ၊ ဘယ်သောခါ၊ ပြန်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
၁၉) ခုချိန်ထိငြား၊ ပြိုင်ဘက်များ၊ မနားစာရွက်လှန်တုန်းပင်။
၂၀) အနာခံမှ၊ သာစံရ၊ မှတ်ကြရှေးစကား။
1. Sleep now, Dream will come out; Study now, Dream will come true.
2. My wasteful today is the tomorrow those losers begging for.
6. You do not lack time to study, you are lacking the efforts.
8. Study is one but not the only component of your life, but if you cannot even overcome this single component, what can you overcome?
9. Please enjoy the pain if it is unavoidable.
10. Get up early, Grind out hardy, Gain on success.
12. Time pass by.
16. People who invest the future are the true realists.
17. Education equals income.
19. Even at this very moment your competitors will not stop flipping pages.
Posted by Harry at 10:47 1 comments
Labels: ကြယ်စင်လှိုင်းခတ်သံကဗျာများ, ဘာသာပြန်ကြည့်မိသည့် ကဗျာများ
သီတင်းကျွတ်အခါသမယမှာ လူငယ်ကဗျာဆရာလေးတွေက ဘုရားတရားကို ပူဇော်တဲ့ ကဗျာတွေ ရေးဖွဲ့ပြီး ယဉ်ကျေးလိမ္မာကြသလောက် မိုက်ပင်ပျိုး၍ မိုက်ဆိုးမိုက်မဲ မိုက်မြဲမိုက်လျက်ရှိနေတဲ့ ကျနော် မောင်ဟယ်ရီကတော့ လူမိုက်ကြီးပီပီ အရက်နဲ့ မြင်းသားအကြောင်း သုံးချက်ညီတေးထပ်တပုဒ်ကို မျက်နှာပြောင်ပြောင်နဲ့ ခပ်တည်တည် ဆက်ရေးပါတယ် ခင်ည ... ဆဲသွားကြပါကုန် ... ဟေဟေဟေ
မင်းတရားဟန် စည်းစိမ်ကွယ့်လေး။ ။
ချီရွန် = ကဗျာဆြာကြီး (ဟု သူ့ကိုယ်သူ သတ်မှတ်သူ) ချီရွန်(ပုလဲ)
မောင်ချီရွန် မြှောက်ပေးလို့ သောက်မိစားမိခြင်းဖြစ်ပါ၍ ယမမင်း၏ ခွေးရေပုရပိုက်တွင် အကုသိုလ် ခွဲတမ်းထဲပါသူ ဒင်းကိုပါ မှတ်သားထားစေလိုပါကြောင်း ... အပြစ်တင်လိုပါကလည်း ထိုငနဲကိုပါ ရော၍အပြစ်တင်ကြပါကုန် ...
အလုပ်များနေ၍တကြောင်း ... ကွန်နက်ရှင်မကောင်း၍တကြောင်း ... အခြားအကြောင်းများကြောင့်နှင့်လည်းပေါင်းစုံ၍ ပို့စ်များ မတင်နိုင်ခြင်းကို ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါရန် တောင်းပန်ပါသည် ခင်ဗျား ...
Posted by Harry at 21:04 1 comments
(ကဗျာဆြာကြီး ချီရွန်(ပုလဲ) ၏ လမ်းညွှန်မိန့်မှာချက်အရ … မိုက်သဟ အဟေဟေဟေ)
ကာဇက် = ကာဇက်စတန်
Posted by Harry at 22:162comments
Posted by Harry at 03:330comments
ဖတ်ရှုခံစားအားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးပါ ခင်ဗျာ
Posted by Harry at 02:51 1 comments
လေးလုံးစပ်ရေးနည်းကို ရှင်းပြပါဆိုပြီး တောင်းဆိုကြသူတွေ များလာလို့ ထပ်ရေးထားပါတယ် ... လေးလုံးစပ် လင်္ကာသွားနဲ့ အခြေခံကဗျာစပ်နည်းတွေကို ထပ်ပြောပါ့မယ်။ မရေးတတ်သေးသူ၊ စတင်လေ့လာကာစ သူများ အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ တတ်ကျွမ်းနားလည်ပြီးသူ ပညာရှင်များအတွက် ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
လေးလုံးစပ်ကဗျာတွေကို “လင်္ကာသွား” နဲ့ ရေးတယ် လို့လည်း ပြောကြပါတယ်။ လင်္ကာ၊ ရတု၊ ပျို့၊ ဧချင်း၊ သံပိုင်း၊ သမိုင်း စတဲ့ မြန်မာဂန္ထဝင်ကဗျာအမျိုးအစားတွေဟာ လေးလုံးစပ်လင်္ကာသွားနဲ့ချည်း ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
(၁) စာလုံး ၄-လုံးကို အပိုဒ်ငယ်တပိုဒ် (ပါဒ တခု) အဖြစ် ထားရပါတယ်
(၂) ဘယ်နှစ်ပိုဒ်အထိရေးရမယ်ဆိုတဲ့ ကန့်သတ်ချက် မရှိပါ။ ကြိုက်သလောက်ရေးနိုင်ပါတယ်။ (ရတု တွေက ချွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ရတု တွေမှာ ၁၀၈-ပိုဒ်ထက် ပိုမစပ်ရပါ။ ဒါပေမဲ့ သျှိုးလိုက်ရတု ခေါ် မင်္ဂလာရတုတွေကတော့ အပိုဒ်ရေ ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။ ပျို့တွေလိုပဲ အပိုဒ်ရေ အမြောက်အများ ရေးစပ်လေ့ရှိပါတယ်။)
(၃) အဆုံးသတ်တဲ့အခါ စာလုံး ၇-လုံး (သို့မဟုတ်) ၈-လုံးနဲ့ အဆုံးသတ်လေ့ ရှိပါတယ်။ အဲဒါကို ‘ချ’ တယ် လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီအပိုဒ်ငယ်ကို ‘အချပိုဒ်’ လို့ ခေါ်ပါတယ်။ (ရတုတွေအတွက် အချကိုတော့ အမျိုးမျိုး ချလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကိုတော့ လေးလုံးစပ်ကို ကျွမ်းကျင်မှ ရတုအကြောင်းမှာ သီးသန့် လေ့လာပါ)
(၄) အဲဒီလိုစပ်တဲ့အခါ တပိုဒ်နဲ့ တပိုဒ် (ပါဒ တခုနဲ့တခု) ကာရန်ချိတ်ပေးရပါတယ်။ ဒီလို ကာရန်ချိတ်ဖို့အတွက် အခြေခံ ကာရန်စပ်နည်း ၅-မျိုး ရှိပါတယ်။ အောက်မှာ တခုချင်း ပြောပါ့မယ်။
(မှတ်ချက်။ ။ တကယ်တော့ လေးလုံးစပ်ကဗျာတွေအတွက် ကာရန်ယူနည်းက ၆-မျိုးဖြစ်ပါတယ် ... ဒီနည်းတွေကို အစပ် ခြောက်ပါး လို့ ရှေးဆရာများ သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ် ... ဒါပေမဲ့ အဲဒီထဲက နောက်ဆုံးနည်းဖြစ်တဲ့ ချိန်ခွင်လျှာစပ်နည်းကို နောက်ပိုင်းမှာ ဆရာတွေက ပယ်ခဲ့ကြပါတယ် ... ဒါကြောင့် ၅-နည်းပဲ အသုံးများတယ် လို့ ပြောရပါမယ်)
ကာရန်ဆိုတာ ပါဠိစကား ကာရန္တ ကနေလာပါတယ်။ အက္ခရာရဲ့အဆုံးသတ် (ဒါမှမဟုတ်) အဆုံး အက္ခရာ လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ကဗျာမှာဆိုရင်တော့ အက္ခရာအချင်းချင်း အသတ်တူ (သို့မဟုတ်) အသံတူ စပ်ထားတဲ့ စာလုံးတွေကို ဆိုလိုပါတယ်။
ပထမဆုံး စပ်နည်းကို ကြည့်ကြရအောင်။
သတ်စေ့နှက်သုံးချက်ညီ စပ်နည်း (၄-၃-၂ စပ်နည်း)
ဒီနည်းကို အတိုကောက် ၄-၃-၂ စပ်နည်း လို့ မှတ်ပါ ... အခြေခံအကျဆုံးနဲ့ အသုံးအများဆုံး စပ်နည်းဖြစ်ပါတယ်။
လေးလုံးစပ်မြန်မာကဗျာတွေမှာ ကာရန်ယူရင် အတွဲတတွဲပြည့်အောင် ယူရပါတယ်။
အခုစပ်နည်းမှာ ကာရန်တတွဲပြည့်ဖို့အတွက် အပိုဒ်ငယ် ၃-ပိုဒ်ကို ကာရန်တူချိတ်ဆက်ပေးရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကာရန် ၃-ချက် ယူရပါတယ်။ ပထမဆုံးစတဲ့ ကာရန်ကို “အခံကာရန်” လို့ ခေါ်ပြီး နောက်ကလိုက်တဲ့ ကာရန်တွေကို “အအုပ်ကာရန်” လို့ ခေါ်ပါတယ်။
ဘယ်နေရာတွေမှာ ချိတ်ဆက်ပေးရမှာလဲ ဆိုတော့ ပထမဆုံးအပိုဒ်ရဲ့ စာလုံး (၄)လုံးမြောက်၊ ဒုတိယအပိုဒ်ရဲ့ စာလုံး (၃) လုံးမြောက်၊ တတိယအပိုဒ်ရဲ့ စာလုံး (၂)လုံးမြောက်တွေကို ကာရန်တူ ချိတ်ဆက်စပ်ဆို ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၄-၃-၂ လို့ အတိုကောက် မှတ်ကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်က ဥပမာ မှာ အဝါရောင် ပြထားတဲ့နေရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆုံးအပိုဒ်ရဲ့ စာလုံး (၄)လုံးမြောက် (ခြေ)၊ ဒုတိယအပိုဒ်ရဲ့ စာလုံး (၃) လုံးမြောက် (ထွေ)၊ တတိယအပိုဒ်ရဲ့ စာလုံး (၂)လုံးမြောက် (ရေ) တွေကို ကာရန်တူ ချိတ်ဆက်စပ်ဆိုထားတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီလို ပထမ ၃-ပိုဒ်ကို ခြေ-ထွေ-ရေ ဆိုပြီး ကာရန်ချိတ်ပြီးသွားတဲ့အခါ ကာရန်တတွဲပြည့်စုံသွားပါပြီ။ လေးလုံးစပ်မှာ ကာရန်လွတ်နေတာ တချက်မှ မရှိရဘူး ဆိုတာ အထူးသတိပြုရပါမယ်။ ဒါကြောင့် နောက်ထပ် ကာရန်အသစ်တတွဲ ပြန်စရပါမယ်။
ဒီလို နောက်ထပ် ကာရန်အသစ်တတွဲကို ဘယ်ကပြန်စရမလဲ ဆိုရင် ပထမကာရန်တွဲ (၄-၃-၂ ယူထားတဲ့ ကာရန်တွဲ) ဆုံးသွားတဲ့ အပိုဒ်ကနေပဲ ပြန်စရမှာပါ။ ဘယ်နေရာကနေ ပြန်စရမလဲဆိုတော့ အဲဒီအပိုဒ်ရဲ့ လေးလုံးမြောက်ကပဲ ပြန်စရပါမယ်။
ဒါကြောင့် ပထမကာရန်တွဲ ဆုံးသွားတဲ့ အပိုဒ်က (မြစ်ရေဝန်းလည်) ဆိုတဲ့ အပိုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအပိုဒ်ရဲ့ လေးလုံးမြောက် (လည်) ဆိုတဲ့ နေရာကနေ ကာရန်တွဲအသစ်တခု ပြန်စယူထားတာကို အပြာရောင်နဲ့ ပြထားပါတယ်။ ဒီမှာလည်း ကာရန်က ၄-၃-၂ ကိုပဲ ယူထားတာကြောင့် (လည်-ဆီ-ပြည်) ဆိုပြီး စပ်ထားတာ တွေ့ရပါမယ်။
အဲဒီမှာ ဒုတိယကာရန်တွဲ ပြည့်သွားပါပြီ။ ဒါကြောင့် နောက်ထပ် ဆက်စပ်ချင်ရင် အဲဒီ ဒုတိယ ကာရန်တွဲ ဆုံးတဲ့ (ရွှေပြည်ကိုသာ) ဆိုတဲ့ အပိုဒ်ရဲ့ လေးလုံးမြောက်ဖြစ်တဲ့ (သာ) ဆိုတဲ့ အစိမ်းရောင်စာလုံးကနေ နောက်ထပ် ဆက်ပြီး စပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမ အပိုဒ်ကြီးတပိုဒ်လုံး ဘယ်လို ကာရန်တွေ ယူသွားလဲဆိုတာ အားလုံးပြီးတဲ့အခါ ဆက်ပြပါ့မယ်။
လေးလုံးစပ်မှာ အဲဒီ အချက်ဟာ သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။ အများအားဖြင့် လေးလုံးစပ် စရေးကာစမှာ ၄-၃-၂ ချိတ်ပြီးပေမဲ့ အဲဒီ ကာရန်တွဲ ဆုံးသွားတဲ့ အပိုဒ်ကနေ အသစ်ပြန်မစမိဘဲ လွတ်သွားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကို ဂရုစိုက်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ထိပ်ချင်းထပ် စပ်နည်း (၄-၃-၁ စပ်နည်း)
ဒီနည်းကို အတိုကောက် ၄-၃-၁ စပ်နည်း လို့ မှတ်ပါ။
အခုစပ်နည်းမှာလည်း ကာရန်တတွဲပြည့်ဖို့အတွက် အပိုဒ်ငယ် ၃-ပိုဒ်ကို ကာရန်တူချိတ်ဆက်ပေးရပါတယ်။
ဘယ်နေရာတွေမှာ ချိတ်ဆက်ပေးရမှာလဲ ဆိုတော့ ပထမဆုံးအပိုဒ်ရဲ့ စာလုံး (၄)လုံးမြောက်၊ ဒုတိယအပိုဒ်ရဲ့ စာလုံး (၃) လုံးမြောက်၊ တတိယအပိုဒ်ရဲ့ အစ စာလုံး (၁-လုံးမြောက်) တွေကို ကာရန်တူ ချိတ်ဆက်စပ်ဆို ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆုံးအပိုဒ်ရဲ့ စာလုံး (၄)လုံးမြောက် (ရာ)၊ ဒုတိယအပိုဒ်ရဲ့ စာလုံး (၃) လုံးမြောက် (ကွာ)၊ တတိယအပိုဒ်ရဲ့ စာလုံး (၁)လုံးမြောက် (မှာ) တွေကို ကာရန်တူ ချိတ်ဆက်စပ်ဆိုထားတာ တွေ့ရပါမယ်။
အဲဒီလို ပထမ ၃-ပိုဒ်ကို (ရာ-ကွာ-မှာ) ဆိုပြီး ကာရန်ချိတ်ပြီးသွားတဲ့အခါ ကာရန်တတွဲပြည့်စုံသွားပြီဖြစ်လို့ နောက်ထပ် ကာရန်အသစ်တတွဲ ကို ပထမကာရန်တွဲဆုံးတဲ့ (မှာလည်းမကြား) ဆိုတဲ့ အပိုဒ်ရဲ့ လေးလုံးမြောက် (ကြား) ကနေပြီး ပြန်စရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးတိုက် (ထိပ်ချင်းတိုက်) စပ်နည်း (၄-၁ စပ်နည်း)
ဒီနည်းကတော့ အပေါ်က နှစ်နည်းလို သုံးလုံးတတွဲ ကာရန်မယူဘဲ နှစ်လုံးတတွဲကာရန်ယူတဲ့နည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အတိုကောက် ၄-၁ စပ်နည်း လို့ မှတ်ပါ။ ခပ်တိုတို ခပ်သွက်သွက် အကြောင်းအရာတွေကို စပ်ရင် သုံးလေ့ရှိပါတယ်။
အခုစပ်နည်းမှာ ကာရန်တတွဲပြည့်ဖို့အတွက် အပိုဒ်ငယ် ၂-ပိုဒ်ကို ကာရန်တူချိတ်ဆက်ပေးရပါတယ်။
ဘယ်နေရာတွေမှာ ချိတ်ဆက်ပေးရမှာလဲ ဆိုတော့ ပထမဆုံးအပိုဒ်ရဲ့ စာလုံး (၄)လုံးမြောက်နဲ့ ဒုတိယအပိုဒ်ရဲ့ အစ စာလုံး (၁-လုံးမြောက်) တွေကို ကာရန်တူ ချိတ်ဆက်စပ်ဆို ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ နှစ်ချက်ယူလိုက်ရုံနဲ့ ကာရန် တတွဲ ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၄-၃-၁ စပ်နည်းက ဥပမာ မှာ ပထမကာရန်တွဲဆုံးတဲ့ (မှာလည်းမကြား) ဆိုတဲ့ အပိုဒ်ရဲ့ လေးလုံးမြောက် (ကြား) ကနေပြီး ပြန်စပြီး ၄-၁ ဆက်ယူပုံကို အောက်က ဥပမာမှာ ကြည့်ပါ။
အဝါရောင် ပြထားတဲ့နေရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆုံးအပိုဒ်ရဲ့ စာလုံး (၄)လုံးမြောက် (ကြား)၊ ဒုတိယအပိုဒ်ရဲ့ စာလုံး (၁)လုံးမြောက် (သွား) တွေကို ကာရန်တူ ချိတ်ဆက်စပ်ဆိုထားတာ တွေ့ရပါမယ်။
အဲဒီလို အပိုဒ် ၂-ပိုဒ်ကို ကြား-သွား ဆိုပြီး ကာရန်ချိတ်ပြီးသွားတဲ့အခါ ကာရန်တတွဲပြည့်စုံသွားပြီဖြစ်လို့ နောက်ထပ် ကာရန်အသစ်တတွဲ ကို ကာရန်တွဲဆုံးတဲ့ (သွားလည်းမသင့်) ဆိုတဲ့ အပိုဒ်ရဲ့ လေးလုံးမြောက် (သင့်) ကနေပြီး ပြန်စရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိပ်ချင်းချွတ် (ရထားပြေး) စပ်နည်း (၄-၂ စပ်နည်း)
အတိုကောက် ၄-၂ စပ်နည်း လို့ မှတ်ပါ။ ဒီနည်းကလည်း ခပ်တိုတို ခပ်သွက်သွက် အကြောင်းအရာတွေကို စပ်ရင် သုံးလေ့ရှိပါတယ်။
ဒီနည်းက ၄-၁ စပ်နည်းလိုပါပဲ။ နှစ်လုံးတတွဲကာရန်ယူပါတယ်။
ဘယ်နေရာတွေမှာ ချိတ်ဆက်ပေးရမှာလဲ ဆိုတော့ ပထမဆုံးအပိုဒ်ရဲ့ စာလုံး (၄)လုံးမြောက်နဲ့ ဒုတိယအပိုဒ်ရဲ့ စာလုံး (၂)လုံးမြောက် တွေကို ကာရန်တူ ချိတ်ဆက်စပ်ဆို ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ နှစ်ချက်ယူလိုက်ရုံနဲ့ ကာရန် တတွဲ ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆုံးအပိုဒ်ရဲ့ စာလုံး (၄)လုံးမြောက် (မြို့)၊ ဒုတိယအပိုဒ်ရဲ့ စာလုံး (၂)လုံးမြောက် (သို့) တွေကို ကာရန်တူ ချိတ်ဆက်စပ်ဆိုထားတာ တွေ့ရပါမယ်။
အဲဒီလို အပိုဒ် ၂-ပိုဒ်ကို မြို့-သို့ ဆိုပြီး ကာရန်ချိတ်ပြီးသွားတဲ့အခါ ကာရန်တတွဲပြည့်စုံသွားပြီဖြစ်လို့ နောက်ထပ် ကာရန်အသစ်တတွဲ ကို ကာရန်တွဲဆုံးတဲ့ (သည်သို့စေတီ) ဆိုတဲ့ အပိုဒ်ရဲ့ လေးလုံးမြောက် (တီ) ကနေပြီး ပြန်စရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ (တီ-ဆီ) ဆိုပြီး အပြာရောင်ပြထားတဲ့အတိုင်း ၄-၂ နဲ့ပဲ ဆက်ပြီး စပ်ဆိုသွားပါတယ်။ ပြီးတော့ နောက်ထပ် ကာရန်တွဲအသစ်ကိုလည်း အရင်ကာရန်တွဲ အဆုံးသတ်တဲ့ (သည်ဆီရွှေနန်း) အပိုဒ်ရဲ့ လေးလုံးမြောက် ဖြစ်တဲ့ (နန်း) ကနေ ပြန်စပြီး (နန်း-တန်း) ဆိုပြီးတော့ အစိမ်းရောင်ပြထားတဲ့အတိုင်း ၄-၂ စပ်နည်းနဲ့ပဲ ဆက်ပြီး စပ်ဆိုသွားတာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနည်းလေးနည်း ကို အသေအချာ ကျေညက်အောင် လေ့ကျင့်စပ်ဆိုကြည့်စေလိုပါတယ်။ နောက်ထပ်နည်းတနည်း ဖြစ်တဲ့ ဘီလူးရယ်စပ်နည်းကို ဒီလေးနည်းကို ပိုင်နိုင်မှသာလျှင် ဆက်လက် လေ့ကျင့် စပ်ဆိုကြည့်ဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာတခုပြောချင်တာက လေးလုံးစပ်ကဗျာတပုဒ်ကို စပ်ရင် ကာရန်စပ်နည်းတမျိုးတည်း သုံးဖို့ မလိုပါဘူး။ (သုံးချင်ရင်လည်း ရပါတယ် ... ဒါပေမဲ့ လိုအပ်သလို နည်းစုံထည့်စပ်တာ ပိုကောင်းပါတယ်) ကာရန် စပ်နည်းတွေ အားလုံး အဆင်ပြေသလို လှည့်ပတ် သုံးစွဲပြီး စပ်သွားလို့ရပါတယ်။
ဘီလူးရယ်စပ်နည်းကို မပြောခင် လေးလုံးစပ်ကဗျာတွေကို “ချ”ပုံ တနည်းအားဖြင့် အဆုံးသတ်ပုံကို ပြောပါ့မယ်။
အပေါ်က ပြခဲ့တဲ့ နည်းတွေ အတိုင်း စပ်လာခဲ့ပြီး အဆုံးသတ်မယ်ဆိုရင် ကာရန်တွဲတတွဲပြည့်သွားတဲ့ အပိုဒ်မှာ အဆုံးသတ်လိုက်လို့ ရပါတယ်။ ဒီလို အဆုံးသတ်တဲ့အခါ (ချတဲ့အခါ) မှာတော့ စာလုံးရေ ၇-လုံးနဲ့ အများဆုံး ချလေ့ရှိပါတယ်။
အောက်က ဥပမာကို ကြည့်ပါ။
အပေါ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အတိုင်း (၄-၂) စပ်နည်းနဲ့ စပ်လာပြီး အဆုံးသတ်ကာနီးမှာ (၄-၂) ကာရန်ဆုံးတဲ့ (ဖြောင့်တန်းတော့မည်) အပိုဒ်ရဲ့ ၄-လုံးမြောက်ကနေ ကာရန်အသစ်တတွဲ ပြန်စပြီး (၄-၃-၂) စပ်နည်းနဲ့ (မည်-ရည်-ပြည်) ဆိုပြီး ၃-ပိုဒ်ကို ကာရန်ချိတ်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ (ပြည်) ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကာရန်တတွဲပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒီအပိုဒ်ငယ်ကို အဆုံးသတ် အချပိုဒ်အဖြစ် ယူပြီး ၄-လုံးအစား ၇-လုံးရေးပြီး (ရွှေပြည်ဌာနဝေးသောကြောင့်) ဆိုပြီး အဆုံးသတ်လိုက်တာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။
၇-လုံးအစား ၈-လုံးချချင်ရင်လည်း ချလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၈-လုံးချချင်ရင်တော့ အဲဒီအချပိုဒ်ရဲ့ (၄)လုံးမြောက်နဲ့ (၆)လုံး (သို့မဟုတ်) ၇-လုံးမြောက်ကို ကာရန်တချက် ပြန်ချိတ်ပြီးမှ ချလေ့ရှိပါတယ်။
ဥပမာ ... ရွှေပြည်ဌာ(န) ဝေး(လှ)သောကြောင့်။ ဆိုပြီး ချလိုက်တာမျိုးပါ။
ဒီစပ်နည်းက နည်းနည်း ထူးခြားပါတယ်။ သူလည်း အပိုဒ်သုံးပိုဒ် စပ်ရတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အပေါ်က ၄-၃-၂ နဲ့ ၄-၃-၁ စပ်နည်းတွေလို တပိုဒ်မှာ ကာရန်တချက်စီနဲ့ သုံးပိုဒ်ကို သုံးချက်ယူတာ မဟုတ်ဘဲ ဒုတိယပိုဒ်မှာ ကာရန်နှစ်ချက်ယူလိုက်တာပါ။
ပထမပိုဒ်နဲ့ ဒုတိယပိုဒ်ကို လေး-သုံး ကာရန်ယူပါတယ်။ တစ်ခါ အဲဒီ ဒုတိယပိုဒ် ရဲ့ လေးလုံးမြောက် ကို တတိယအပိုဒ်ရဲ့ တစ်လုံးမြောက် (သို့) နှစ်လုံးမြောက် (သို့) သုံးလုံးမြောက်စာလုံးနဲ့ ကာရန်ပြန်ယူပါတယ်။
ဥမ္မာဒန္တီ ပျို့ ကနေထုတ်နှုတ်ပြထားတဲ့ အောက်က ဇယားကွက်နဲ့ ဥပမာ ပြထားတာတွေကို ကြည့်ပါ။
ဒီနည်းကိုကြည့်ရင် (ညီ-ဏီ) ဆိုပြီး ၄-၃ ကာရန်ယူလာပြီးတဲ့နောက် ၄-၃-၂ လို တတွဲမပြည့်ခင် အောက်တပိုဒ်ကို မဆင်းတော့ဘဲ အဲဒီအပိုဒ်မှာပဲ (၄) လုံးမြောက်ဖြစ်တဲ့ (က) ကနေပြန်စပြီး နောက်တပိုဒ်ရဲ့ ပထမ စာလုံး (စ) နဲ့ ကာရန်ပြန်ယူထားတာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ပုံစံက ၄-(၃၄)-၁ ဖြစ်သွားပါတယ်။
ဒီနည်းမှာတော့ (ငြား-သွား) ဆိုပြီး ၄-၃ ကာရန်ယူလာပြီးတဲ့နောက် တတွဲမပြည့်ခင် အဲဒီအပိုဒ်မှာပဲ လေးလုံးမြောက်ဖြစ်တဲ့ (လျှင်) ကနေပြန်စပြီး နောက်တပိုဒ်ရဲ့ ဒုတိယစာလုံး (ပင်) နဲ့ ကာရန်ပြန်ယူထားတာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ပုံစံက ၄-(၃၄)-၂ ဖြစ်သွားပါတယ်။
ဒီနည်းမှာတော့ (စွာ-မာ) ဆိုပြီး ၄-၃ ကာရန်ယူလာပြီးတဲ့နောက် တတွဲမပြည့်ခင် အဲဒီအပိုဒ်မှာပဲ သူ့ရဲ့ လေးလုံးမြောက် ဖြစ်တဲ့ (၌) ကနေပြန်စပြီး နောက်တပိုဒ်ရဲ့ တတိယစာလုံး (လိုက်) နဲ့ ကာရန်ပြန်ယူထားတာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ပုံစံက ၄-(၃၄)-၃ ဖြစ်သွားပါတယ်။
ဒီ စပ်နည်းက ပုံမှန်ကာရန်စပ်နည်းတွေလိုမဟုတ်ဘဲ ဒုတိယပိုဒ်ရောက်တာနဲ့ အဲဒီအပိုဒ်ကနေ စာလုံးအသစ်တစ်လုံးကို ကာရန်အသစ်ပြန်စယူတာမို့ မူလကာရန်စပ်နည်းတွေကို ဝင်နှောက်ယှက်ပြီး စပ်ဘက်တဲ့အတွက် ဘီလူးရယ်သံလို အနှောက်အယှက်ပေးတတ်တဲ့ ပုံစံဖြစ်နေလို့ ဘီလူးရယ်လို့ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သာဓိနပျို့လာ ပုံစံမှာတော့ ထိပ်ချင်းချွတ်စပ်နည်းကို မှီခိုပြီး နောက်ထပ်ပုံစံသစ်တမျိုးထွင်ပြီးစပ်တာကို အောက်ပါအတိုင်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။
နာမည်သီးခြားတပ်ထားတာ မရှိသေးတဲ့ အခြားစပ်နည်းများကို ဆက်လက်ဖော်ပြပါ့မယ်။ ပုံစံအားဖြင့်တော့ ဘီလူးရယ် စပ်နည်းခွဲတွေပဲ ဖြစ်တယ်လို့ ထင်မြင်ပါတယ်။ ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်ကတော့ သုံးလို့ရတယ်လို့ ညွှန်ပြထားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကျနော့်သဘောအရတော့ ဒီနည်းတွေဟာ မူလ အစပ်ခြောက်ပါးထဲ မပါတဲ့အပြင် အသုံးအလွန်နည်းလှတာမို့ အပေါ်က ကာရန်စပ်နည်း ၅-မျိုးကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ပြီးမှသာလျှင် သုံးသင့်ပါတယ်။ ကာရန်အားလုံးကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တဲ့ ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်တို့လို ကဗျာကဝိတွေ အထူးအခြားဖွဲ့ချင်မှသာ (special effect လိုချင်မှ) သုံးသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ် ... သာမာန်အားဖြင့် များများစားစား သုံးစွဲတာ မတွေ့ဖူးပါဘူး ... ကျနော်တော့ တခါမှ မသုံးဖူးပါဘူး ...
ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရ ရဲ့ စတုဓမ္မသာရ ကိုးခန်းပျို့ထဲက ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းကတော့ ၄-၂ အစား ၃-၁ ယူပြီး စပ်တဲ့နည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမအပိုဒ်ရဲ့ (၃) လုံးမြောက်နဲ့ ဒုတိယအပိုဒ်ရဲ့ အစ (၁)လုံးမြောက်ကို ကာရန်ချိတ်ပေးရပါမယ်။ ဒါဆိုရင် ကာရန်တတွဲပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီကာရန်တွဲဆုံးတဲ့ အပိုဒ်ရဲ့ (၄)လုံးမြောက် (သက်) ကနေ နောက်ထပ် နှစ်သက်ရာ ကာရန်စပ်နည်း တမျိုးမျိုးနဲ့ ဆက်လက် စပ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းဟာ များသောအားဖြင့် စစချင်း အပိုဒ်နှစ်ပိုဒ်ကိုပဲ ဒီနည်းနဲ့ စပ်တာတွေ့ရပြီး အလယ်ပိုဒ်တွေမှာ စပ်တာ တွေ့ရခဲပါတယ်။
နတ်သျှင်နောင်ရဲ့ စစ်ချီရတုထဲက ထုတ်နှုတ်ပြထားတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းကတော့ ၄-၂ အစား ၃-၂ ယူပြီး စပ်တဲ့နည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီနည်းလည်း စစချင်း အပိုဒ်နှစ်ပိုဒ်ကိုပဲ စပ်တာတွေ့ရပြီး အလယ်ပိုဒ်တွေမှာ စပ်တာနည်းပါတယ်။ ဆုတောင်းခန်းပျို့၊ ပထမအပိုဒ်ကြီးထဲမှာပဲ ...
လင်းစေမျက်မှောက်၊ အမိုက်ဖျောက်၍၊ ရောက်ဘုံထို(ခါ)၊ (ဝါ)လ[နီး]သော်၊ စော[မီး]ရှင်မွန် ... (နီး-မီး)
ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရ ရေးတဲ့ ဘူရိဒတ်လင်္ကာကြီး အပိုဒ် (၉၀) မှာ ... ဆိုပါ[ဘိ]လော၊ မိ[မိ]ပင်ကိုယ် ... (ဘိ-မိ)
ဆိုပြီး အတွင်းမှာ စပ်ထားတွေ့ဖူးပါတယ်။ ဒီလို စပ်ထားတဲ့ တခြားကဗျာလင်္ကာတွေ ရှိတော့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အသုံးနည်း ပါတယ်။
ဒီနည်းလည်း တွေ့ရခဲပါတယ်။ ဆုတောင်းခန်းပျို့ရဲ့ အပိုဒ်ကြီး (၁) မှာ အောက်က ဥပမာ ဇယားကွက်အတိုင်း စပ်သွားတာကို တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ ဘီလူးရယ်စပ်နည်းရဲ့ နည်းခွဲတခုအဖြစ် ယူဆနိုင်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် အပေါ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ဘီလူးရယ်နည်းခွဲ ၄-(၃၄)-၃ စပ်နည်းနဲ့ ၃-၂ စပ်နည်းကို ပေါင်းစပ်ထားခြင်းလို့လည်း ယူဆနိုင်ပါတယ်။
သံမြွက်ဝှဲချီး၊ ဟောပေပြီးမှု၊ ချေချွတ်ပြုမှ၊ ဥရုဝေလ၊ ...
ပြည်ကျော်နဂိုရ်၊ ရာဇဂြိုဟ်တွင်၊ ရောက်တုံကျင်မှ၊ ဖူးမြင်လာရှောင်း ...
အစရှိသဖြင့်လည်း အဲဒီအပိုဒ်ကြီး (၁) မှာ ဆက်လက် စပ်ဆိုထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဘူရိဒတ်လင်္ကာကြီး၊ အပိုဒ် (၉၁) မှာလည်း ...
မပျက်စတောင်း၊ ဝဲခနောင်း၌၊ ပစ်ထည့်လိုက်ဟု၊ တိုက်တိုက်တွန်းတွန်း .. ဆိုပြီး စပ်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
အလွန်တွေ့ရခဲတဲ့ စပ်နည်းဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာ ဥပမာ ကြည့်ပါ။
ဒါ့အပြင် လယ်တီဆရာတော်ဘုရားရေးတဲ့ သီဟတောဘုရားကျောက်စာ သံပိုင်း (ဂမ္ဘီရကဗျာကျမ်း၊ စာ-၈၂) မှာလည်း ...
လူရှင်သော(သော)၊ ခုတိုင်(ပြော)သား၊ သီဟ(တော)ခေါ်၊ ပုထိုးတော်ကို၊ မင်းကျော်ရာဇိန် ...
အကြိမ်လေး(လီ)၊ ပြင်ဆင်(ပြီ)တည့်၊ ပဉ္စ(မီ)ကြုံ ...
ဆိုပြီး ဒီနည်းကို သုံးသွားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဒီနည်းဟာ ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရလို၊ လယ်တီဆရာတော်လို ရှေးပညာရှိ ကဗျာကဝိဆရာများ သုံးစွဲသွားတဲ့အတွက် စပ်ရင်လည်း မှားတယ်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျနော့်အမြင်အရတော့ ဖြစ်နိုင်ရင် မသုံးသင့်ဘဲ တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ကြဉ်သင့်တဲ့ စပ်နည်းဖြစ်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုရင် မြန်မာ လေးလုံးစပ်လင်္ကာသွားရဲ့ ကာရန်ယူနည်းတွေမှာ နောက်ကာရန်ဟာ ရှေ့ကာရန်ကို ကျော်လေ့လည်း မရှိ၊ ထပ်တူ ဖြစ်လေ့လည်း မရှိလို့ပါပဲ။ ဒီနည်းကလွဲပြီး တခြားနည်းတွေမှာ နောက်ကလိုက်တဲ့ကာရန် (တနည်း အအုပ်ကာရန်) မှန်သမျှမှာ ရှေ့ကကာရန် (အခံကာရန်) တွေထက် အမြဲ စောယူလေ့ရှိပါတယ်။ ဥပမာ ၄-၃-၂၊ ၄-၃-၁၊ ၄-၂ စသဖြင့်ပါ။ ဒါကတော့ ကျနော့် အယူအဆ သက်သက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနည်းဟာလည်း အလွန်တွေ့ရခဲတဲ့ စပ်နည်းဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာ ဥပမာ ကြည့်ပါ။
အဲဒီတော့ လေးလုံးစပ်လင်္ကာသွား နဲ့ ရေးထားတဲ့ မြန်မာကဗျာတပုဒ်ကို ဘယ်လိုနည်းတွေ သုံးပြီး ရေးထားသလဲ ဆိုတာ အခု နမူနာအနေနဲ့ ခွဲထုတ်ပြပါမယ် ... လက်ဝဲသုန္ဒရအမတ်ကြီးရေးဖွဲ့ထားတဲ့ “မဲဇာတောင်ခြေ” အစချီ ရတုရဲ့ ပထမအပိုဒ် ဖြစ်ပါတယ်။
မဲဇာတောင်ခြေ၊ စီးတွေတွေတည့်၊ မြစ်ရေဝန်းလည်၊ (၄-၃-၂) (ကာရန်တတွဲပြည့်သွားလို့ အဲ့ဒီကာရန်တွဲ ဆုံးတဲ့ အပိုဒ် (ပါဒ) ဖြစ်တဲ့ "မြစ်ရေဝန်းလည်" ရဲ့ ၄-လုံးမြောက် (လည်) ကနေ စပြီး ကာရန်တွဲအသစ် ပြန်ယူရပါတယ်။ လေးလုံးစပ် စရေးသူတွေ မှားတဲ့နေရာ အဲဒီနေရာပါပဲ ... ကာရန်အသစ်ပြန်စတဲ့အခါ ပထမကာရန်တွဲ ဆုံးတဲ့ အပိုဒ်ကနေ ပြန်မစမိဘဲ နောက်တပိုဒ်ကမှ ပြန်စမိလို့ လွတ်သွားတတ်တာမျိုးပါ)
မြစ်ရေဝန်းလည်၊ မြိုင်တောဆီက၊ ရွှေပြည်ကိုသာ (၄-၃-၂)
ရွှေပြည်ကိုသာ၊ တ-ရှာတော့မိ၊ (၄-၂)
တ-ရှာတော့မိ၊ မိုးရှိရှိလျှင်၊ သီရိကြက်သရေ၊ (၄-၃-၂)
သီရိကြက်သရေ၊ တက်ဖြိုးဝေသား၊ အောင်မြေကြော့ကြော့၊ (၄-၃-၂)
အောင်မြေကြော့ကြော့၊ ကုန်းမော့မော့နှင့်၊ ဘိုးတော့်ကောင်းမှု၊ (၄-၃-၂)
ဘိုးတော့်ကောင်းမှု၊ တည်ထားပြုသည်၊ ဇမ္ဗူ့ဆီမီး၊ (၄-၃-၂)
ဇမ္ဗူ့ဆီမီး၊ ခြောက်ရောင်ညီးမျှ၊ ဂူကြီးသခင်၊ (၄-၃-၂)
ဂူကြီးသခင်၊ ရွှေလင်းပင်နှင့်၊ ရွှေခြင်္သေ့မွေ၊ (၄-၃-၂)
ရွှေခြင်္သေ့မွေ၊ စ၍ရေသော်၊ ရွှေစေတီကြီး၊ (၄-၃-၂) ဒါမှမဟုတ် (၄-၃-၁) လို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်
ရွှေစေတီကြီး၊ အသီးသီးတည့်၊ ပိတ်ဆီးခြယ်သန်း၊ (၄-၃-၂)
ပိတ်ဆီးခြယ်သန်း၊ လျှပ်ရောင်တန်းမျှ၊ ရွှေနန်းရွှေဘုံ၊ (၄-၃-၂)
ရွှေနန်းရွှေဘုံ၊ အလုံးစုံကို၊ အာရုံမျက်မြင်၊ (၄-၃-၂)
အာရုံမျက်မြင်၊ ဖူးမျှော်ချင်၍၊ သည်တွင်ရွှေမြို့၊ (၄-၃-၂)
သည်တွင်ရွှေမြို့၊ သည်သို့စေတီ၊ (၄-၂)
သည်သို့စေတီ၊ သည်ဆီရွှေနန်း၊ (၄-၂)
သည်ဆီရွှေနန်း၊ ဖြောင့်တန်းတော့မည်၊ (၄-၂)
ဖြောင့်တန်းတော့မည်၊ စိတ်က ရည်သည် …. ရွှေပြည်ဌာန ဝေးသောကြောင့်။ …. ။ (၄-၃-၂)
နောက်ဆုံးအချပိုဒ်မှာ ကာရန်တတွဲပြည့်အောင် ယူပြီးမှ ချရတာကို သတိပြုပါ ...
ကာရန် အများစုက ၄-၃-၂ နဲ့ အဓိက စပ်သွားပေမဲ့ ဆုံးကာနီးမှာ "သည်တွင်ရွှေမြို့၊ သည်သို့စေတီ၊ သည်ဆီရွှေနန်း" ဆိုပြီး ၄-၂ တွေချည်း တောက်လျှောက် ယူသွားတဲ့အတွက် ခပ်သွက်သွက် ဖြစ်သွားပြီး ဖတ်တဲ့အခါ မြို့တော်၊ စေတီ၊ နန်းတော် နေရာတွေကို ဖျတ်ကနဲ၊ ဖျတ်ကနဲ ပြသွားသလို ဖတ်သူရဲ့ စိတ်ထဲ ပေါ်လာစေပါတယ် ... အဲဒီလိုနေရာမျိုးမှာ ၄-၃-၂။ ၄-၃-၁ စတဲ့ ကာရန်တွဲ အရှည်တွေ သုံးလိုက်ရင် အဲ့လို effect မျိုး ရမှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ သတိပြုထိုက်ပါတယ် ...
ဒါဆိုရင် လေးလုံးစပ် လင်္ကာသွားနဲ့ စပ်လို့ရသမျှ စပ်နည်း အားလုံး ကုန်ပြီလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ (ချိန်ခွင်လျှာ စပ်နည်းကိုတော့ ပညာရှိများ ပယ်ခဲ့ကြလို့ ထည့်သွင်းမဖော်ပြတော့ပါဘူး။ ဒီနည်းက လေးလုံးစပ်မှာထက် ရကန်တို့လို အသွားတွေမှာ စပ်လေ့ရှိပါတယ်)
အစပိုင်းမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အခြေခံစပ်နည်း ၄-မျိုးကို အရင်ပိုင်နိုင်အောင် ကာရန်မလွတ်ဘဲ ရေးတတ်အောင် လေ့ကျင့်ပြီးမှ နောက်ပိုင်း စပ်နည်းတွေကို သုံးစွဲသင့်ပါတယ်။ ဒီစပ်နည်းတွေက ရှုပ်ထွေးတာမို့ မရှင်းတာရှိရင်လည်း အချိန်မရွေး မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် ...
ကာရန်များဖြင့် ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ ...
Posted by Harry at 01:093comments
Labels: မြန်မာကဗျာဆိုတာ ဂျို(ချို)နဲ့လား